ब्रिटेनको युनिभर्सिटी अफ हडर्सफिल्डको स्कुल अफ ह्युमन एण्ड हेल्थ साइन्सेजका प्राध्यापक डा पदम सिम्खडासंगको अन्तरवार्ता
८ जेष्ठ, २०७७ शीतलपाटीन्युज डटकम। 1262
यो अहिले ठूलो चासोको बिषय हो। मैले विश्वविद्यालयबाट यस बारेमा अनुसन्धान हुनुपर्छ भनेर लागि परेको छु । हामीले यसको बारेमा अनसन्धान पनि गर्दछौ । अहिलेसम्म ६० जना नेपालीको निधन भएको समाचार आएको छ । ती मध्ये ११ जना महिला र अरु पुरुष। पुरुषमध्ये धेरै भूतपुर्व सैनिक भनेर आएको छ। जस्तो ५० जना पुरुषको निधन हुदा त्यो नम्बर ठुलो हो कि अरु जनसंख्याका आधारमा हेर्दा समानूपातिक नम्बर हो त्यो हेर्न जरुरी छ । तुलना नगरी धेरै भन्न सकिदैन । बेलायतमा गैरसैनिक बुढाबुढीको तुलनामा भुतपूर्व गोर्खा परिवारमा बुढाबुढी धेरै भएर निधन बढी भएको देखिएको हुन सक्छ । तरपनि शंका गर्ने ठाउँ भने छ । गैरसैनिक बुढाबुढीको सख्या भएपनि कम देखिन्छ । अहिले हामीले अनुसन्धान गरेर निकालेको निष्कर्षका केही कारण छन । जसमा पुरानो अध्ययनले के देखाउँछ भने भूपुगोर्खाहरुमा भिडभाड युक्त बसाईका कारणले छिटो संक्रमण फैलिएको देखिन्छ । जसका कारण उनीहरुको निधन बढी देखियो । यो चाहि सवै जातीय अल्पसंख्यकमा लागू हुन्छ। दोस्रो,भूपुसैनिक बृद्धबृद्धामा पुराना रोगहरु धेरै भएको कुराहरु आएको छ । जसमा सुगर, मुटुको रोग, किड्नी समस्या आदि। तेस्रो भूपुगोर्खाका परिवार कोही न कोही एनएचएसको अग्रपक्तिमा काम गर्नेछन । जस्तो, डाक्टर, नर्स , क्लिनर, केयरर आदि। उनीहरुको एक्सपोजर कारणले इन्फेक्सन भएर निधन बढी भएको भन्ने छ ।
बेलायतको ओएनएसको तथ्यांकले उच्च जोखिममा स्वास्थ्यकर्मी भन्दा पनि सुरक्षाकर्मी देखिएका छन। धेरै जसो भूपुगोर्खाहरु सुरक्षाकर्मीका रुपमा काम गर्ने भएकाले त्यहाँबाट एक्पोजर भएको हो कि भन्ने छ। त्यसले गर्दा अहिले सम्म यही कारणले भन्न गाह्रो छ । भीडभाडको बसाई, एक्पोजर यी कारणले बढी निधन भएको हुन सक्छ ।
अर्काे अध्ययनले के देखाएको छ भने उहाँहरु आर्मीमा रहंदा पोस्ट ट्राउमेट्र्कि स्ट्रेस डिसअर्डर(पिटिएसडि) भएका हर्माेनल कारणले पनि कोप गर्न सक्ने मेकानिज्म दिमागमा कम हुन्छ। त्यो पनि अध्ययन गर्न जरुरी छ। त्यसपछि मात्र ठ्याक्कै भन्न सकिएला। एनएचएस, पव्लिक हेल्थ इग्ल्याण्ड र व्रिटिश सांसदहरुले गोर्खाका जीवन जोखिमका बारेमा केही बोलेको देखिदैन । त्यो चाहि हामीले उनीहरु समक्ष आफ्नो कुरा पुर्याउन नसकेर होकी ? एकदमै हो। ब्रिटेनमा झण्डै ४० हजार निधन पुग्दा ४० जनाको निधनको कुरा ठुलो भएन । यदि डिसप्रोपोसन्लि चाहि यी मान्छे मरेका हुन भने हामीले कुरा बाहिर ल्याउनुपर्छ। तर, कुनै पनि लविङ गर्न तथ्यांक चाहिन्छ। अनुसन्धान गर्न पर्छ । प्रारम्भिक तथ्यांक हामी छिटो ल्याउँछौ।
यसमा थुप्रै कुरा छ। यहाँ केही साथीहरुले गोर्खाहरु विमारी भएको बेला अस्पताल जादा भाषाअनुवाद गर्न मान्छे लान पाएनन्। अंग्रेजीमा सवै कुरा भन्न सकेनन् । त्यसकारण आपतकालीन अवस्थामा पनि अंग्रेजी भाषाअनुवाद गर्ने मानिसको सहुलियत हुनु पर्छ भनेर केही साथीहरुले कुरा उठाउनु भएको थियो । त्यसले कति असर पारेको छ , त्यो हेर्न जरुरी छ। ति सवै कुरालाई हेर्न सक्यौ भने उनीहरुको अन्डरलाइंग कन्डिसन के हो, के कारणले उनीहरुमा यो समस्या आएको हो भनेर अलिकति कारण थाहा भयो भने यो कारणले बढी मृत्यू भएको छ भन्ने सकिन्छ। पूर्वगोर्खाका निधन अरु अल्पसंख्यक समुदायको तुलनामा बढी हो कि होइन भनेर स्थापित गर्न जरुरी छ । त्यो भएपछि हामीसंग प्रमाण हुन्छ । त्यो प्रमाणका आधारमा हामी बोल्न सक्छौ ।
सरकारले कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्न लिएको नीतिलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
कोरोनाले ग्लोवल हेल्थ फिल्डमा नयाँ आयाम थपेको छ । नयाँ आयाम यो अर्थमा कि जनताको स्वास्थ्य राम्रो हुनलाई त्यो देश धनी हुनुपर्छ। पर्याप्त डाक्टर, अस्पताल, हेल्थ सिस्टम राम्रो हुनु पर्छ भनिन्थ्यो। त्यो सत्य हो। कोरोनाले त्यतिले मात्र पुग्दो रहेनछ भन्ने देखाएको छ । यदी सरकारले आपतकालिन अवस्थामा लिने आपतकालिन नीति ठिक भएन भने ति सवै भएर पनि जनतालाई राम्रो स्वास्थ्य उपचार दिन सक्दो रहेनछौ। गाह्रो रहेछ भन्ने देखायो । दुई उदाहरण दिन्छु। संसारकैे धनी देश अमेरिका, जिडिपी धेरै भएको देश अमेरिका। त्यो देश धनि भएर पनि ८० हजार भन्दा बढी मानिसको निधन भैसक्यो ।
विश्व जनसंख्याको तीन प्रतिशत बस्ने अमेरिकामा मृत्यू हुनेहरु मध्ये २५ प्रतिशत अमेरिकन रहेका छन । जति धनी भएपनि समयमै नीति नियम बनाउन नसक्दा यस्तो भएको हो। अर्काे कुरा हेल्थ सिस्टम, हेल्थ वर्कर र स्कीलको कुरा गर्नु हुन्छ भने बेलायतको एनएचएस विश्वभर बेस्ट हेल्थ केयर सिस्टम मानिन्छ। बेलायत संसारको पुरानो र हाइर्ली सोफिस्टीकेटेड अस्पताल र टेक्नोलोजि भएको देश हो । बेलायतमा हाइली क्वालीफाइड डाक्टर छन। प्राय यही ट्रे्रन भएका डाक्टरले विश्वभर अध्यापन गराउंछन। हेल्थ सिस्टम, वर्कर, हस्पिटल लगायतका सवै कुरा हुंदा पनि यूरोपमा सबै भन्दा बढी मानिस बेलायतमै मरेका छन। अझै तथ्यांक तुलना गर्ने बेला भएको छैन । प्रारम्भिक तथ्यांकका आधारमा हेर्ने हो भने के देखाउंछ भने हेल्थ सिस्टमको चार वटा आधारभूत कुरा भएर पनि यदी हाम्रो आपतकालिन नीति राम्रो भएन भने देखि इमरजेन्सीमा मानिसलाई जोगाउदो रहेनछ भन्ने देखियो।
बेलायतमा कोरोना विरुद्ध सरकारले लिएको नीतिमा केही कमि कमजोरी छ । सुरु देखि नै म नकारात्मक सोचाईमा थिए। यदिे १२ मार्चदेखि सरकारले लकडाउन गरी टेस्ट एण्ड ट्रेसिङ गरेको थियो भने अहिलेको मृत्यू हुने भन्दा आधाको मात्र मृत्यू हुने थियो। यो धेरै ढिला भयो । छिटो लकडाउन गरेको भए छिटो खोल्न पनि सक्थ्यो । मृत्यूदरलाई कम गर्न सक्थ्यो। एक, लकडाउनमा ढिलाई भयो । दोस्रो कुरो हर्ड इम्यूनिटी कन्सेप्ट ल्याए। हर्ड इम्यूनीटिको कारणले मानिसहर्रु एक्सपोज भएभने पछि रिकभर हुन्छ । सवैलाई एक पटक एक्सपोज हुन दिआंै भने। तर यो रोगको सिभिरिटी र रोगले मार्न सक्ने स्थिति हेर्दा हर्ड इम्यूनिटिको कन्सेप्ट गलत थियो । त्यसमा सवै मानिसले विरोध गरे। जुन रोगले लाखौ मानिसलाई असर गर्न सक्छ। जुन रोगको म्याक्सिन छैन । त्यसमा हर्ड इम्यूनिटिको कन्सेप्ट गलत हो।
अर्काे कुरा कोरोना संक्रमणमा भएको कमजोर पक्ष भनेको के हो भने मानिसलाई अरु देशको तुलनामा यो रोगको सिभियारिटिलाई तीन तहमा बाडन सक्छौ ।
सुरुमा माइल्ड अवस्था: सामान्य लक्षण देखिने खालको
तेस्रो एकदमै सिरियस अवस्था, जहाँ बोल्न पनि गाह्रो भएर अस्पताल भर्ना गर्नुपर्ने।
अरु देशमा के देखिन्छ भने दोस्रो अवस्थामा इन्फेक्सनबाट जोगाएर मानिसलाई समयमा अस्पताल पुर्याएर उपचार गर्दा बाच्ने रेट राम्रो छ। यहाँ चाहि त्यो गरिएन। मानिसलाई एकै पटक अन्तिम अवस्थामा पुगेपछि मात्र अस्पताल आउनु भन्ने एडभाइस भयो। अहिले अलिकति परिवर्तन गरेको छ। जसले गर्दा मानिसहरु लास्ट स्टेजमा पुगे र बांच्ने रेट कम भयो। क्लिनिकल उपचारमा मेकानिकल भेन्टिलेटर राख्यो। मेकानिकल भेन्टिलेटरमा गएको मानिस मध्ये ५० प्रतिशत मात्र बांच्छन। त्यो भन्दा अघिल्लो स्टेजको उपचारलाई प्रभावकारी हुन्छ भन्ने कुरा अहिले आइरहेको छ। अन्तिम अवस्थामा बोलायो र मेकानिकल भेन्टिलेरमा राख्यो। अक्सिजन भेन्टिलेरमा होइन। त्यसले धेरै मृत्यूदर बढायो ।
बेलायतका हेर्ने हो भने गरीव, धेरै मानिस बस्ने ठाउँ र हाई रिस्क जागिर गर्ने मानिसमा मृत्यूदर बढी छ। संरचनागत,अपर्याप्त स्वास्थ्य फ्याक्टरहरु महत्वपुर्ण छ। त्यसले गर्दाे बेलायतले लिएको नीति गलत छ। सरकारको प्राथमिकता अहिले स्वास्थ्यलाई दिने कि अर्थतन्त्रलाई दिने भन्ने द्धिविधा छ। दुवैको व्यालेन्स कसरी गर्ने भन्ने महत्वपूर्ण कुरा हो । अर्थतन्त्र सकियो भने अर्काे नतीजा के हुन्छ भने। तर, यो सरकारले चीनमा जनवरीमा कोरोनाको पाजेटिभ केस भएपछि मार्चसम्म तयारीको समय थियो। त्यो समयलाई सदुपयोग गर्न सकेन। लकडाउनमा ढिलाइ, विण्डो अवधिको समय सदुपयोग गर्न नसक्नु, अण्डरलाईन हेल्थ इनइक्वालिटीको समस्या थियो। त्यो समस्याले गर्दा दुभाग्यवस बेलायत धेरै मृत्यू हुने मुलुकमा पुग्यो।
यो अहिले ठूलो चासोको बिषय हो। मैले विश्वविद्यालयबाट यस बारेमा अनुसन्धान हुनुपर्छ भनेर लागि परेको छु । हामीले यसको बारेमा अनसन्धान पनि गर्दछौ । अहिलेसम्म ६० जना नेपालीको निधन भएको समाचार आएको छ । ती मध्ये ११ जना महिला र अरु पुरुष। पुरुषमध्ये धेरै भूतपुर्व सैनिक भनेर आएको छ। जस्तो ५० जना पुरुषको निधन हुदा त्यो नम्बर ठुलो हो कि अरु जनसंख्याका आधारमा हेर्दा समानूपातिक नम्बर हो त्यो हेर्न जरुरी छ । तुलना नगरी धेरै भन्न सकिदैन । बेलायतमा गैरसैनिक बुढाबुढीको तुलनामा भुतपूर्व गोर्खा परिवारमा बुढाबुढी धेरै भएर निधन बढी भएको देखिएको हुन सक्छ । तरपनि शंका गर्ने ठाउँ भने छ । गैरसैनिक बुढाबुढीको सख्या भएपनि कम देखिन्छ । अहिले हामीले अनुसन्धान गरेर निकालेको निष्कर्षका केही कारण छन । जसमा पुरानो अध्ययनले के देखाउँछ भने भूपुगोर्खाहरुमा भिडभाड युक्त बसाईका कारणले छिटो संक्रमण फैलिएको देखिन्छ । जसका कारण उनीहरुको निधन बढी देखियो । यो चाहि सवै जातीय अल्पसंख्यकमा लागू हुन्छ। दोस्रो,भूपुसैनिक बृद्धबृद्धामा पुराना रोगहरु धेरै भएको कुराहरु आएको छ । जसमा सुगर, मुटुको रोग, किड्नी समस्या आदि। तेस्रो भूपुगोर्खाका परिवार कोही न कोही एनएचएसको अग्रपक्तिमा काम गर्नेछन। जस्तो,डाक्टर,नर्स क्लिनर,केयरर आदि। उनीहरुको एक्सपोजर कारणले इन्फेक्सन भएर निधन बढी भएको भन्ने छ ।
यसमा थुप्रै कुरा छ। यहाँ केही साथीहरुले गोर्खाहरु विमारी भएको बेला अस्पताल जादा भाषाअनुवाद गर्न मान्छे लान पाएनन्। अंग्रेजीमा सवै कुरा भन्न सकेनन् । त्यसकारण आपतकालीन अवस्थामा पनि अंग्रेजी भाषाअनुवाद गर्ने मानिसको सहुलियत हुनु पर्छ भनेर केही साथीहरुले कुरा उठाउनु भएको थियो । त्यसले कति असर पारेको छ , त्यो हेर्न जरुरी छ। ति सवै कुरालाई हेर्न सक्यौ भने उनीहरुको अन्डरलाइंग कन्डिसन के हो, के कारणले उनीहरुमा यो समस्या आएको हो भनेर अलिकति कारण थाहा भयो भने यो कारणले बढी मृत्यू भएको छ भन्ने सकिन्छ। पूर्वगोर्खाका निधन अरु अल्पसंख्यक समुदायको तुलनामा बढी हो कि होइन भनेर स्थापित गर्न जरुरी छ । त्यो भएपछि हामीसंग प्रमाण हुन्छ। त्यो प्रमाणका आधारमा हामी बोल्न सक्छौ।
यसले स्पष्ट रुपमा देखाई दियो । सार्वजनिक स्वास्थ्यमा सुविधा भएको भए, समयमा ट्रेस, ट्राक र टेस्ट गर्ने अवस्था रहिदिएको भए, कतिपय रोगहरु यस्ता हुन्छन प्रिभेन्सन इज बेटर दैेन केओर पनि भनिन्छ । अर्काे कुरा सार्वजनिक स्वास्थ्यको लगानी चाहिं दीर्घकालिन फाइदा धेरै कुराले हुन्छ । अहिले पनि बेलायत सरकारले गएको १० बर्षमा हेल्थ एण्ड केयरको लगानी घटाएको रहेछ । त्यसले गर्दा यो अवस्था आएको हो भनेर एउटा मिटिङ तथ्यांक केलाउदा थाहा भयो । हाम्रो जस्तो देशमा पनि र विकसित देशमा पनि राम्रो स्वास्थ्य सेवाको मेकानिज्म छ । त्यहाँ सावधानी अपनाउने, शिक्षित गर्ने र ट्र्याक गर्ने कुरा, ट्र्रेसिङ गर्ने कुरा, जुन पनि रोग व्यवस्थापनमा जे कुरा चाहिन्छ त्यो सार्वजनिक स्वास्थ्य राम्रो भएको देशमा समयमा व्यवस्थापन गरेको छ। आर्थिक अवस्था राम्रो नभएपनि राम्रो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा, मेकानिज्म विकास गरेको छ भने रोग फैलिने रोक्ने गरेको छ । रोग फैलिन रोकेपछि अस्पताल जाने कम हुन्छन । अस्पताल जाने कम भएपछि मृत्यूदर कम हुन्छ । त्यसैले सार्वजनिक स्वास्थ्यको इन्टरभेन्सन नै महत्वपूर्ण रहेछ ।
generic cialis [url=https://valcialisns.com/]buy cialis[/url] buy cialis online cialis cialis
female viagra pills [url=https://viagenupi.com/#]buy cheap viagra[/url] buy viagra new york buy cheap viagra best place to buy viagra online
buying viagra online [url=https://viagenupi.com/#]viagra substitute[/url] cheapest viagra viagra substitute buy viagra pills
मिस्टर एण्ड मिस स्टार चितवन–२०१९सम्पन्न,भावना पाण्डे र श्रवण श्रेष्ठले चुमे उपाधि- फर्स्ट रनरअप रुपा केसी र सेकेन्ड रनरअप नविना अधिकारी
"भट्टराई एण्ड को इमीग्रेशन प्राक्टीस "द्वारा १२ नेपाली विद्यार्थीलाई सहयोग